Munaasabada Gabagabadii Iyo Gunaanadkii Udenbeeyay ee UBBO - Cakaara News
Munaasabada Gabagabadii Iyo Gunaanadkii Udenbeeyay ee UBBO
Jigjiga(cakaaranews)isniin 25ka July 2016. Munaasabad balaadhan oo loogu magacdaray gabagabadii iyo gunaanadkii UBBO laguna soo dhawaynayay guusha wayn ee uu ciidanka liyuu boolisku kasoo hoyiyay hawlgalkii soomaaliya ee lagaga talaabo qaaday sheekh deeq laguna soo qaqabtay dhabuuke, gadhcase, beergeel iyo gantaal ayaa niskii danbe ee maanta kadhacday hoolka shirarka Kali ee xarunta madaxtooyada DDSI.
Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu ugu horeeyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi maxamuud Cumar, afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq, madaxwayne kuxigeenada, Golaha wasiirada, shaqaalaha qaybahooda kaladuwan, culimo-awdiin, odayaal dhaqameedyo, hooyooyin iyo waliba marti sharaf kale.
Waxaana munaasabadan ugu horayn furay hogaan kuxigeenka xafiiska nabadgalyada, maamulka iyo cadaalada DDSI mudane Ibraahim Maxamuud Mubaarak oo kawarbixiyay guulihii isdabajooga ahaa ee tan iyo intii la aas aasay ay soo hoyiyeen ciidamada liyuu boolisku oo ay ugu danbaysay hawlgalkii soomaaliya ee lagu soo gunaanaday hadhaagii UBBO. Wuxuuna intaa kudaray in xaalada nabadgalyada ee maanta deegaanku kusugun yahay ay tahay 100/200 islamarkaana uu horumarka deegaanku gaadhay meel aad usaraysa. Sidoo kale wuxuu hogaan kuxigeenku soo dhigay geedi-socodka munaasabada.
Kadibna waxaa xigay riwaayad xiiso leh oo ay soo bandhigeen kooxaha fanka iyo suugaanta deeganku islamarkaana katurjumaysay sida uu udhacay hawlgalkii lagu soo gunaanaday UBBO iyagoo kooxuhu masraxa kamuujiyay wacdaro aad u soo jiidatay kasoo qaybgalayaasha
Dhinaca kale waxaa madasha lagu soo dhaweeyay madaxyo-wayntii UBBO oo ay kamid ahaayeen: mahad cismaan ceelaabe(dhabuuke), axmed cismaan (gadhcase ama axmed-dheere) iyo beergeel kuwaasoo gumaadyo iyo xasuuqyo ba’an ugaystay shacabwaynaha deegaanka guud ahaan. Waxayna kawarbixiyeen fikirkii xumaa ee ay aaminsanaayeen, xaaladii fool-xumada lahayd ee ay dadka kula dhaqmi jireen islamarkaana waxay cafis waydiisteen xukuumada DDSI iyo shacabka deegaankaba.
Hadaba madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo kahadlay munaasabadan ayaa bulshada usheegay in nimankani ay yihiin gabagabadii iyo gunaanadkii hadhaagii yaraa ee UBBO oo uusan maanta wax hadhay jirin isagoo kafaalooday in waxa lala dagaalamayay uu ahaa fikirka balse uu san ahayn magaca. Iyo in muhiimadu ay tahay in hadii qofku uu nolol helo uusan fikir xun qaadanaynin. Wuxuuna madaxwaynuhu ku amaanay ciidanka liyuu booliska tabta, muwaafaqada iyo kaladanbaynta cilmiyaysan ee ay had iyo jeer kugalaan hawlgalada taasoo ah mida kadanbaysa guulaha isdabajooga ah. Madaxwaynaha ayaana maxaabiista usheegay inaysan cidna waxyeelaynin oo ay gacanta dawlada kujiraan islamarkaana lacafiyayo. Wuxuuna ilaahay uga mahadceliyay sida uu ugu suurta galiyay xukuumada iyo shacabkaba dhamaan isbadalada deegaanka kahanaqaaday ee dhinacyada Horumarka, Nabadgalyada iyo maamulka suuban.
Ugudanbayna waxaa dhankooda kahadlay culimo-awdiinka, odayaal-dhaqameedyada, iyo hooyooyinka oo dhamaantood sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin gabagabada iyo gunaanadka UBBO islamarkaana u mahadceliyay ciidamada gaarka ah ee liyuu booliska, xukuumada iyo xisbigaba waxayna cadeeyeen in cafiska ay waydiisteen maxaabiista lasoo qabtay ay ka aqbaleen.